FIFANEKENA FIFANEKENA MIKASIKA NY FIFIDIANANA: Ny votoatin'ity fitaovana ity dia fifandraisana amin'ny varotra, fa tsy fikarohana fikarohana tsy miankina. Noho izany, ny fepetra ara-dalàna sy ara-dalàna mifandraika amin'ny fikarohana momba ny fampiasam-bola tsy miankina dia tsy mihatra amin'ity fitaovana ity ary tsy azo atao ny mandrara izany amin'ny alàlan'ny fanelezana azy.
Ny fitaovana dia ny tanjona amin'ny fampahalalana ankapobeny ihany (na tsy milaza izany ny hevitra rehetra). Tsy mitandrina ny toe-javatra iainanao na ny zava-kendrenao manokana izany. Tsy misy na inona na inona ato amin'ity fitaovana ity (na tokony ho raisina ho toy ny hoe) lalàna, vola, fampiasam-bola na toro-hevitra hafa izay tokony hametrahana fiankinana. Tsy misy hevitra atolotra ao amin'ny fitaovana dia ny fanolorana avy amin'ny FXCC na ny mpanoratra fa ny fampiasam-bola manokana, filaminana, fifampiraharahana na tetikady fampiasam-bola dia mety ho an'ny olona manokana.
Na dia azo avy amin'ny loharanom-baovao izay azo itokisana aza ny vaovao voaray amin'ity fifandraisana ara-barotra ity, dia tsy manome antoka ny FXCC momba ny fahamendrehany na ny fahafenoana. Ny fampahalalana rehetra dia manondro ary mety hiova tsy am-pisalasalana ary mety tsy ho amin'ny daty amin'ny fotoana rehetra. Na ny FXCC, na ny mpanoratra ity fitaovana ity, dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana mety hitranga aminao, na mivantana na tsy mivantana, avy amin'ny fampiasam-bola mifototra amin'ny fampahalalana rehetra voatanisa ato.
Ity fitaovana ity dia mety ahitana tabilao mampiseho ny zava-bita ara-pitantanam-bola ara-bola ary koa ny tombantombana sy ny fanombanana. Ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fahombiazan'ny fampiasam-bola taloha dia tsy voatery hanome antoka ny amin'ny ho avy ho avy.
Raha tsy misy fanamarihana manokana, ny vidiny ampiasaina amin'ny ohatra dia ny vidin'ny FXCC, fa tsy ny an'ny olon-kafa.